निर्मलाको परिवारमा किन उत्पन्न भयो विवाद ? « Janaboli
निर्मलाको परिवारमा किन उत्पन्न भयो विवाद ?
काठमाडौ । निर्मला पन्तको शरीरबाट संकलन गरिएको भजाइनल स्वाब उनकै हो–होइन एकिन गर्न आमा दुर्गादेवी पन्तले रगतको नमुना दिएकी छन् । यही विषयमा परिवारमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।रगतको नमुना मलाई नसोधेर किन दिएको भन्दै यज्ञराज पन्तले घरमै गएर उनलाई कुटपिटको प्रयास गरेका हुन् ।
धर्नास्थलबाट बिहान सिधै घर पुगेर रगतको नमुना किन दिएको भन्दै यज्ञराजले दुर्गादेवीलाई कुटपिटको प्रयास गरेका हुन् । ‘रगत किन दिइस्, मलाई फसाउन खोज्ने तँ ? भन्दै कुटपिटको प्रयास भयो’ दुर्गादेवीले भनिन्, ‘रगत दिएको विषय र राहत बुझ्न खोजेको विषयलाई लिएर घरमै आएर विवाद गरे ।’
राहत बुझेमा घरमै आत्महत्या गर्दिने भन्दै धम्कीसमेत दिएको दुर्गादेवीले बताईन् । भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखाममा घरमा कान्छी श्रीमती लक्ष्मीसहित पुगेका यज्ञराजले दुर्गादेवीलाई कुटपिटको प्रयास गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । साउन १० गते साथीको घरमा होमवर्क गर्न गएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको साउन ११ गते भीमदत्त नगरपालिका २ र १८ को सीमामा पर्ने निम्बुखेडा खोला नजिकैको उखुबारीमा शव भेटिएको थियो ।
उनको साउन १० गते नै बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । तर, निर्मलाकी आमा दुर्गाले न्यायको लागि पर्खिदा पर्खिदा दुई छोरीमाथी पनि अन्याय हुने भएकाले राहत बुझेर छोरीको भविष्य बनाउने भन्दै राहत बुझ्न तयार भएको बताएकी छन् ।